तनुश्रीले अमिताभलाई किन पाखण्डी भनिन ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalतनुश्रीले अमिताभलाई किन पाखण्डी भनिन ?
Home मनोरञ्जन तनुश्रीले अमिताभलाई किन पाखण्डी भनिन ?
तनुश्रीले अमिताभलाई किन पाखण्डी भनिन ?
काठमाडौँ : बलिउडका महानायक मानिन्छन् अमिताभ बच्चन । उनका फ्याहरु भारतमा करोडौं छन् । उनको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने हिम्मत कमैले गर्छन् । तर, अभिनेत्री तनुश्री दत्तले हालै एक अन्तरवार्तामा अमिताभको कटु आलोचना गरेकी छन् । उनले कथित महानायकलाई ‘पाखण्डी’ संज्ञा दिइन् ।
सन्दर्भ उही नाना पाटेकरले तनुश्रीमाथि गरेको यौन दुर्व्यवहारकै हो । यो प्रकरण बाहिर आएपछि धेरै बलिउड सेलिब्रिटीहरुले खुलेर तनुश्रीको समर्थनमा बोलिरहेका छन् । यसरी मुख खोल्नेमा प्रियंका चोपडा, कंगना रनावतदेखि फरहान अख्तरसम्म छन् । तर, अमिताभले भने यो विषयमा मौनता साँधिरहेका छन् ।
हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा उनीसँग यो घटनाको विषयमा प्रतिक्रिया मागिएको थियो । तर अमिताभले टक्टकिदै भनिएका थिए, ‘न म तनुश्री दत्त हुँ, न नाना पाटेकर । मलाई किन सोधिरहनु भएको छ ?’ अमिताभको यही गैरजिम्मेवार जवाफले तनुश्रीलाई आक्रोशित तुल्याएको हो । उनले सिनेमाको पर्दामा समाज परिवर्तनको अगूवाई गर्नेहरु वास्तविक जीवनमा कति पाखण्डी छन् भन्ने देखिएको बताइन् ।
अमिताभलाई ईंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘उनीहरु पर्दाभित्रका मात्रै हिरो हुन्, वास्तविक जीवनका होइनन् भन्ने पुष्टी भएको छ ।’
ढाड किन दुख्छ ? कसरी उपचार गर्ने ?